Guardiola: Waa Wax Lagu Farxo In La Haysto Foden
Home Horyaalka Ingiriiska Guardiola: Waa wax lagu farxo in la haysto Foden
Pep Guardiola wuxuu rajeynayaa in Phil Foden uu fahmo inay jirto meel badan oo lagu hagaajiyo laakiin wuxuu yiri waa wax lagu farxo in wiilka da ‘yarta ah ee Manchester City uu u ciyaaro kooxdiisa.
Foden ayaa dhaliyay gool cajiib ah isla markaana dhaliyay gool kale iyadoo hogaamiyaasha Premier League City ay 4-1 kaga badiyeen kooxda difaacaneysa Liverpool ciyaar ka dhacday garoonka Anfield axadii.
Foden ayaa ku dhibtooday inuu ciyaarta galo qeybtii hore laakiin waxa uu ku guuleystay kaalinta labaad ka dib markii Guardiola uu bedelay booska uu jecelyahay ee Saxda ah waxaana lagu arkay isbedel qaab ciyaareedkiisa isagoona abuuray fursado badan.
Goolkiisii fiicnaa ayaa soo afjaray 10 daqiiqo oo cajiib ah dabayaaqadii qeybtii labaad ee ciyaarta oo aheyd 1-1 ciyaarta ay kusoo idlaato ilaa 4-1.
Laba kubad oo ka yimid Alisson ayaa hibo u siiyay City goolkoodii labaad iyo seddexaad waxaana qaladaadkaas ka faa’iideysteen Ilkay Gundogan Foden iyo Raheem Sterling oo goolkii 100aad intaa uu maamule u yahay Guardiola kadib kubad qurux badan oo karoos ah uu ka helay Bernardo Silva.
Foden ayaa kaalintiisa ka qaatay waxaana uu dhaliey goolka afaraad kasoo oo xagasha kore ka geliyey kubad uu qalday goolhaya liverpool Taaoo ka dhigtay in lagu dhaleeceeyo in Liverpool guuldaradii seddexaad ee tooska ah ee Anfield markii ugu horeysay dushaloo saaro tan iyo 1963.
Markii wax laga weydiiyay waxqabadka Ingriiska, Guardiola wuxuu u sheegay Sky Sports: “Waa nin kubada si fiican u ilaaliya, runti waa nin dagaal badan.
“Laakiin weli waa uu da ‘yar yahay ma fahmin jagooyinka qaar waxa ay tahay inuu sameeyo marka qeybtii hore ma uusan aheyn mid dheelayey boosaska saxda ah.
Previous articleIbrahimovic ma ahan inuu joojiyo gooldhalinta kadib markii uu gaaray 500 oo gool xilli Pioli uu diray Fariin
Next articlePSG oo ku dagaalameysa Romelo Lukaku.
Wararka Ciyaaraha Maanta2526